पाकिस्तानले कश्मीरको बदलामा यी अभिनेत्रीलाई माग गरेपछि, भारतमा मच्चियो हंगामा ! – Medianp
पाकिस्तानले कश्मीरको बदलामा यी अभिनेत्रीलाई माग गरेपछि, भारतमा मच्चियो हंगामा !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २२, २०७५१७:५७0
एजेन्सी,२२ असोज । भारतीय चलचित्र उद्योगमा तहल्का मच्चाएकी अभिनेत्री माधुरी दिक्षितलाई पाकिस्तान र भारतमा तत्कालीन युद्ध भएको बेला काश्मिरको साटोमा पाकिस्तानले माधुरीको माग गरेको थियो । माधुरीको फ्यान भारतमा मात्र नभएर छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा पनि थुप्रै रहेका थिए । ९० दशक अगाडीको यो घटना माधुरीको लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको थियो ।
पाकिस्तानले राखेको माग एकएक गरेर चौतर्फी रुपमा चर्चा भएपछि भारतमा निकै खैलाबैला नै मच्चिएको थियो । अन्तमा यो कुरा पाकिस्तानका माधुरीको फ्यानले भनेको थिए ।
यसपछि उनले बलिउडमा एकछत्र राज गरेकी थिइन् भन्दा फरक नपार्ला । उनले अभिनय गरेको सम्पूर्ण फिल्महरुले चर्चा बटुल्न सफल भएका थिए । पाकिस्तानमा मात्र हैन भारतमा समेत माधुरीका फ्यानहरुको कमी छैन् । यद्यपी माधुरीको जन्मदिनमा उनका फ्यानहरुले नै देशभर माधुरीको जन्मदिनमा सार्वजनिक बिदाको दिनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका थिए ।
सानै देखी डाक्टर बन्ने चाहना राखेकी अभिनेत्री माधुरी दिक्षितको सपना समय बित्दै गएपछि पूरा हुन सकेन् । तर उनले आफ्नो जीवन साथी भने डाक्टर नै पाइन् । उनले डक्टर श्रीराम नेनेसँग विवाह गरिन् । विवाह पछि भारत र अमेरिकामा दुबै ठाउँमा समय बिताउँदै आएकी माधुरीको दुई छोरा रयान नेने र अरिन नेने रहेका छन् ।
पुरानो मोटरसाइकल चढ्नेलाई कम्पनीहरुका लोभलाग्दो एक्स्चेन्ज अफर
दसैंमा मासु खाने कि फलफूल ? दसैंमा ३० करोडको फलफूल आयात